Maamulka degmada X/weyne oo digniino ka soo saaray shacabka degmadaasina uga digey in aan hub lagu dhex qaadan karin.
Shir Jara’id uu Saxafadda ugu qabtay Magaalada Muqdisho Guddoomiyaha Degmada Xamar Weyne C/qaadir Max’ed C/qaadir ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee degmadaasi Xamarweyne iyo sida ay uga feejiganyihiin dhinaca Amaanka.
C/qaadir Max’ed C/qaadir ayaa ugu horeyntii digniin adag u jeediyay dadka sida sharci darrada ah Hubka ugu dhex qaata dariiqyada degmada Xamarweyne isagoo raaciyey in la adkeeyay wax walba oo amaanka ka dhana iyo in tallaabo uu ka qaadi doono Maamulka degmadaasi wixxi carqalada ah ee lagu dhex arko in amaanka ay ka soo horjeedaan.
Guddoomiye C/qaadir Max’ed C/qaadir ayaa waxa uu tilmaamay in sugida amniga degmadaasi ay ka gacan siinayaan maamulkiisa Ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan Boliiska Iyo Nabad Sugida Gobolka Banaadir ayna wadashaqeyn buuxda ka dhex jirto.
Muddooyinkii la soo dhaafay waxaa siyaabo kala duwan uga dhacay meel yar oo ka mida degmadaas dilal iyo falal kale oo ammaanka liddi ku ah iyadoo aan la ogeyn sida uu u dhaqan geli doono go’aanka Maamulka uu ka soo saaray hubka sida sharci darrada ah loogu heysto degmadaasi Xamarweyne oo ah meelaha muqdisho ugu saxmada badan xiligaan dhinacyada dadka iyo ganacsiga intaba.